Caremụaka na - elekọta ụmụaka | China Ndị na-emepụta nlekọta ụmụaka
Besuper Love Thin Super Soft Soft Baby akwa nhicha
Zuru oke maka ire ahia na nkesa. N’itinye teknụzụ anyị pụrụ iche na nke dị larịị, etubere diaper ka ọ dị nro, na-eku ume, na-adị ọcha ma dịkwa ọcha.
1. Super adụ n'elu-mpempe akwụkwọ ahụ dị ka Merries
2. Super Absorbent Composite Core na Sumitomo SAP
3. Designdị Nhazi 3-D
4. Nnweta Layer
5. Ultra Breathable Akwụkwọ mpempe akwụkwọ
6. Elastic n'úkwù Band
7. S Ọdịdị Akụkụ
Ihe ngosi 8.Wetness
Besuper achara Planet Baby metụ akwa
-100% biodegradable achara eriri n'elu-mpempe akwụkwọ & azụ-mpempe akwụkwọ
-Biodegradability nke OK-biobased kwadoro
-Ọnọdụ kachasị njọ: 61% biodegradation n'ime ụbọchị 75
-Companylọ ọrụ izizi wee mepụta diaper biodegradable diapers kemgbe 2013
-Osisi TCF na-enweghị osisi si na Finland
-Nchekwa maka iji nwa, n'efu nke latex, PVC, TBT ma ọ bụ Antioxidants
-Akwụkwọ mba ụwa: FDA, ISO 9001, CE, TCF, FSC
-Nnukwu ike na SAP dị
-D2W degradable polybay + FSC katọn
-Ọkachamara nkwakọ ngwaahịa + OEM & ODM ọrụ
Besuper Fantastic Yi Baby perkwa Mmanụ
· Super akọrọ 3D pearl embossing top mpempe akwụkwọ
· Super Absorbent Core (Germany SAP + chlorine enweghị osisi pulp)
· Ime anwansi ADL oyi akwa enyere mmamịrị ekesa ngwa ngwa
· Aloe Liners na-elekọta nwa gị akpịrịkpa akpụkpọ
· Breathable spunbond n'elu-mpempe akwụkwọ na yi na-ekpo ọkụ ikuku na-abụghị kpara azụ-mpempe akwụkwọ
· Elastic n'úkwù Band
· Rolling elu teepu
· Wetness egosi
Besuper Bamboo Planet Baby Ọzụzụ Pants
Besuper achara Planet Baby Pull-up Training Pants na-eji teknụzụ dị elu, na-eme ka iku ume, ịdị nro, ịmịcha, nkasi obi na leakproof.
· 100% ekewetde achara eriri n'elu-mpempe akwụkwọ na azụ-mpempe akwụkwọ
· 3D nchere leakage
· Eriri na-agbanwe n'úkwù
· Akwụkwọ mpempe akwụkwọ ume
Besuper achara Planet Eco Wetes Wipes
Akpụkpọ anụ nwa siri ike. Ihe na-eme n'ahụ ụmụ gị abanye abanye n'ahụ́ nwa gị. Besuper Bamboo Planet Eco Wip Wipes na-eme site na okike na emere ka emeghari achara eriri na 98.5% mmiri dị ọcha. Ike ya sitere n'okike na-eme ka nwatakịrị kacha nwee mmetụta dị ala n'ihi na ejiri nlezianya dozie ya ka ọ dị nro na akpụkpọ ahụ ụmụ ọhụrụ. N'ihi na ha bụ hypoallergenic, ha anaghị emekpa akpụkpọ ahụ ma ọ dị mma maka iji ụmụaka eme ihe.
· 100% Achara na-abụghị kpara tiled ákwà
· Mmiri mmiri: 2.8times
· Ọ dịghị mmanya na-aba n'anya
· 99% achara mmiri na-ehichapụ
Besuper Fantastic Yi Baby Pmụaka Ogologo ọkpa
Chọrọ ndị na-ekesa diaper n'ụwa niile maka ụdị ngwa ahịa anyị, ọrụ diaper ọrụ nzuzo na-nyere.
A na-ahazi Besuper Fantastic Yi Baby Training Pants iji nyere aka mee ka usoro ọzụzụ ite dị larịị dịka o kwere mee. Anyị chọrọ ka mgbanwe a nwee ọ andụ na nchekwa na anyị toddler ọzụzụ ogologo ọkpa.
Ngwa ngwa ngwa ịdọrọ
· Embossed non-kpara top-sheet, ultra soft & akọrọ, jiri nwayọọ chebe nwa nwere mmetụta ọsọ ọsọ anụ
· Super Absorbent Core (Germany SAP + TCF osisi pulp)
· Ahapụ ihe mmado & wetness egosi
· Mmanụ aloe vera na - edozi anụ ahụ nke obere gị iji zere ọkụ ọkụ
· Silky dị nro n'úkwù na-emepụta ihe kwesịrị ekwesị ma gbochie azụ azụ
· Mara mma na yi backsheet imewe na nchekwa gburugburu ebe obibi ink
· Ihe mgbochi na-arụ ọrụ nke ọma, iji hụ na ahụ dị nro na-ebelata ihe ize ndụ nke ịchapụ mmiri
· Pụrụ iche breathability technology & Velvet na-abụghị kpara backsheet iji gbochie nappy rash
Besuper Ikuku Newmụaka Diamụaka
Nwa amụrụ ọhụrụ nwere ezigbo mmetụta. Na nke a, anyị mere Besuper Air Newborn Baby Diaper iji chebe nwa ka mma ma belata ihe egwu nke ọnya na isi.
· Na-agbanwe akụkụ pannel & na-agbanwe n'úkwù gbalaga
· Super Soft ikuku na-abụghị kpara elu-mpempe akwụkwọ na-nwa mma
· Super absorbency core with Sumitomo SAP igbachi mmiri mmiri ngwa ngwa
· Oke-eku ume azụ-mpempe akwụkwọ
Besuper nne Choice Baby metụ akwa
Anyị maara na ihe niile ị tinyere na nwa gị gbasara, ọtụtụ. Ọchịchọ nke igbochi ụmụ ọhụrụ ka ekpughere ha na kemikal na-egbu egbu bụ isi ihe kpatara anyị iji mepụta akwa nchekwa dị mma 100%. Ezubere Besuper Nne Choice Baby Diapers iji nye nlekọta na ịhụnanya maka nwa ọhụrụ.
· Hot ikuku na-abụghị kpara ADL (Nnweta Nkesa Layer)
· Super absorbency na Germany BASF SAP
· Weyerhaeuser Fluff pulp (USA) Nkeji edemede
· Akwụkwọ mbugharị na-egbu ume
Velona Cuddles Nwa Aka
Velona Cuddles bụ akara diaper na-eduga na Sri Lanka na ngwaahịa ndị nwere omume enyi na-enweghị ọgwụ kemịkalụ ọ bụla. Baron abụwo onye na-ebubata ntụkwasị obi nke Velona Cuddles ruo ọtụtụ afọ. Anyị na-abụghị nanị na-enyere ika na mmepe na mmepụta, ma na-enye nkwakọ imewe ọrụ iji nyereVelona Cuddles bidoro ncha.
· 100% chlorine n'efu & hypoallergenic.
· Egwuregwu ọla edo abụọ na-egbochi ụkwụ ịbụ O-yiri.
· Wetness egosi na-agbanwe agba mgbe ọ na-ede mmiri, ya mere mummy na-ama mgbe ọ bụla ịgbanwe diapers.
· Mpempe akwụkwọ na-egbu ume na-enye ohere ikuku ọhụrụ ịgbagharị gburugburu ala nwa ma na-eme nkụ n'oge niile.
· Super absorbent Core nwere a pụrụ iche mmiri kpochidoro technology nke na-eme ka ala akọrọ ngwa ngwa.
· Eke aloe na-edozi akpụkpọ anụ na-eme ka anụ ahụ dị nro ma na-eme ka ọ dị nro.
· Ntinye ntị atọ na-agbanwe agbanwe na-enye nnwere onwe kachasị maka ụmụ ọhụrụ.
· Elastic n'úkwù gbalaga na-enye a snug & ala kwesịrị ekwesị.
· Magicdị anwansi na-eme ka metụ akwa ahụ dị ọhụrụ ọtụtụ ugboro.
Metụ nwa, Mezie metụ akwa, High Quality Eco metụ akwa, Mechie nwa ọhụrụ, Baby Wipes N'ihi Mmetụta Skin, Super Absorbency Adult metụ akwa,
High Quality Eco metụ akwa, Baby Wipes N'ihi Mmetụta Skin, Super Absorbency Adult metụ akwa, Mechie nwa ọhụrụ, Metụ nwa, Mezie metụ akwa,